wararka maanta-arlaadii.net » 2018 » January » 1
//January 1, 2018
Ururka Dowliga ah ee Suxufiyiinta Adduunka ayaa sheegay in sanadkii tagy ee 2017-kii siyaabo kala duwan loogu dilay Caalamka in ka badan 80 suxufi iyo shaqaale kale ee Warbaahineed,xilli ay ku guda jireen howl maalmeedkooii. Uurka u dooda suxufiyiinta Adduunka ee IFJ ayaa intaa...
Maxamed C/laahi Farmaajo Madaxweynaha Soomaaliya ayaa lagu wada in uu saxiixo Miisaaniyadda dowladda ee 2018, ooay horey u soo ansixiyeen Golayaasha Xukuumadda iyo Baarlamaanka. Guddoomiyaha Golaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka Soomaaliya Cabdi xubnaha aqalka sare ka dalbaday in...
Wariye muddo 5 maalmood ah kuxiran xabsiga Jowhar
Xabsi kuyaala magaalada Jowhar ayaa weli waxaa kujira Wariye Cabdi Shakuur Shaashaa oo ka mid ah Wariyayaasha ka howlgalla Gobolkaas ahna Milkiilaha Idaacadda Cityfm ee Magaalada Jowhar, oo Ciidamada Booliiska Magaalada Jowhar xabsiga dhigay 28kii December. Maalintii Shanaad ayuu...
Maamulka Galmudug oo fariin u diray Dowladda Soomaaliya
Maamulka Galmudug ayaa fal sharci daro ah ku tilmaamay weerarkii maalin kahor lagu qaaday hoyga Muqdisho uu ka degan yahay Senetor Cabdi Xasan Cawaale (Qeybdiid), kadib kulan shalay ay yeesheen Golaha Wasiirada Galmudug. Wasiir ku xigeenka Wasaaradda Warfaafinta Galmudug...
Kim Jong-un “Keebka laga rido Niyukliyerka waxa uu marwalba saaran yahay miiskeyga”
Hogaamiyaha Waqooyiga Kuuriya Kim Jong-un ayaa sheegay in in keebka laga rido hubka Niyukliyerka uu saaran yahay miiskiisa waxana uu u digey dowlada Maraykanka in uu leeyahay awood uu ku gaaro guud ahaan dalka Maraykanka. Kim oo taleefishinka dalkiisa ka jeediyay qudbad ku aadan...
Dalka Koofur Afrika oo sanadkii la soo dhaafay ee 2017 lagu diley 137 ruux oo Soomaali ah
Dalka Koofur Afrika ayaa sanadkii la soo dhaafay ee 2017 waxaa lagu diley muwaadiniin Soomaaliyeed oo tiradoodu gaareyso 137 ruux halka 74 kalana ay dhaawacyo soo gaareen. Soomaalida lagu diley wadanka Koofur Afrika ayaa waxa ay badankood ahaayeen dhalinyaro ganacsato ah iyadoo...
Alshabaab oo xalay weerar gaadmo ah ku qaaday Bar kontarool oo ku taal meel u dhexeysa Jowhar iyo Balcad
Dagaalyahano ka tirsan Al-Shabaab ayaa xalay weerar kedis ah ku qaaday bar kontarool oo ku taal meel u dhexeysa degmada Balcad iyo Jowhar ee gobolka Sh/dhexe. Wararka ayaa waxa ay sheegayaan in iskahorimaad hubeysan uu dhex maray ciidamo ku sugnaa barta koontarool iyo kooxdii soo...